[Saturday, December 30th, 17] :: Dowladda oo taliyayaal iyo askar u xirtay weerarii lagu qaaday guriga Cabdi Qeybdiid
Muqdisho (RH) War hadda soo dhacay ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay qaadday tallaabadii ugu horreysay ee looga jawaabayo weerarkii maanta duhirkii lagu qaaday guriga uu Muqdisho ka daggan yahay Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid oo ka mid ah xildhibaannada baarlamaanka aqalka sare.
Wakaaladda wararka Soomaaliya ee SONNA ayaa qortay in taliyayaal iyo in ka badan 40 askari loo xiray weerarka lagu qaaday guriga Cabdi Qeybdiid oo horrey u soo noqday taliyaha ciidamada booliska iyo madaxweynaha Galmudug.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa amar siiyey taliyaha ciidanka in uu degdeg u baaro cidda ka dambeesay weerarkaas isla markaanna cid kasta oo ku lug yeelata sharciga lala tiigsan doonno, sida lagu sheegay qoraal la soo dhigay barta Twitterka madaxtooyada.
Dhinaca kale, Xildhibaan Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid oo ka tirsan xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka ayaa goordhow shir jaraa’id ku qabtay gurigiisa isla markaannas saxaafadda soo tusay khasaaraha ka dhashay weerarka lagu qaaday guri uu ka daggan yahay magaalada Muqdisho.
Xildhibaanka ayaa sheegay in maanta markii ay saacaddu ahayd 1-dii iyo 20 daqiiqo ay gurigiisa soo weerareen ciidamo ka tirsan dowladda kuwaasoo markii horre albaabka soo jabiyey khalkhalna galiyey qoyskiisa oo guriga xilligaas ku sugnaa.
Taliyihii horre ee ciidamada booliska Soomaaliya Cabdiqeybdiid ayaa sheegay in xilliga weerarka uu dhacayey uusan joogin gurigiisa oo uu ku sugnaa aqalka sare ee baarlamaanka.
Waxa uu sheegay in ciidamada soo weerarray gurigiisa ay burburiyeen qalab yaallay gurigiisa isla markaanna xaaskiisa iyo gabadhiisa ay ka qaateen taleefonadii ay lahaayeen.
Mar uu ka hadlay ciidanka soo weerarray waxa uu sheegay in marka weerarka uu dhacay uu la soo xiriiray taliyaha hey’adda nabadsugida gobalka Banaadir isla markaanna u sheegay in ciidanka soo weeraray ay ahaayeen kuwa ay tababareen Imaaraadka Carabta.
Madaxweynihii horre ee Galmudug Cabdiqeybdiid ayaa sheegay in mid kamid ah ilaaladiisa la jirdilay, qolalka gurigiisa la jajabiyay, baaris badan laga sameeyay boygiisa iyadoon aan wax fasax ah looga heysan.
Ma jirto illaa hadda wax war ah oo ka soo baxay hey’addaha ammaanka iyo dowladda oo ku aadan weerarka lagu qaaday gurigiisa.
Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya cidda weerartay guriga Senetor Cabdi Xasan Cawaale (Qaybdiid).